Blaginina Elena: biography uye zvisikwa
Elena Blaginina, ane Biography iri zvikuru chokuita nyika pauduku, - yakakurumbira Russian nyanduri uye mushanduri. Zvinopfuura chimwe chizvarwa chechidiki chakakurira pamhando nhetembo dzechokwadi dzemunyori, dingindira remabasa ake rakajeka ...
Nhetembo "Sango Mumatsutso" - Tvardovsky akanyora chiduku chiduku
Mudetembi wechiRussia anoshamisa A.T. Tvardovsky akaponesa yakawanda yakanaka mabasa. Achiuya kubva kuvanhuwo zvavo, akakwanisa pabasa rake, saSergei Yesenin, kuendesa runako rwese rwechisikirwo cheRussia mukureruka kwayo kwakasiyana ...
"The Adventures of Captain Vrungel": pfupiso. "The Adventures of Captain Vrungel" nezvitsauko
Nyaya inonakidza yerwendo rwakanakisa rweCaptain Vrungel yakanyorwa nemunyori weSoviet Andrei Sergeevich Nekrasov. Iyo ngano ine zvitsauko makumi maviri nemaviri. Iine ruzivo runonakidza, rinotaura nezvezviitiko zvemufambisi wengarava. Mudzidzisi…
Borodino. Lermontov M.Yu. Kuongororwa kwenhetembo
Munguva yehupenyu hwake hupfupi, Mikhail Lermontov akanyora huwandu hwakawanda hwemabasa akajeka anokatyamadza nerunako rwe syllable uye nekudzika kwezvinoreva. Nyanduri agara achiyemura zvinhu zviviri: runako rwezvakasikwa uye zviri nyore uye kutendeseka kwevanhu veRussia. Naizvozvo…
Voznesenskaya Julia Nikolaevna: biography, inoshanda
Hupenyu hupenyu hwemukadzi uyu anoshamisa - mudetembi, munyori uye mumishinari - zvaisave nyore. Mukuwedzera kune zvakajairika zviitiko, bhuku rehupenyu raJulia Voznesenskaya zvakare rine mapeji akaoma semisasa nemajeri, kureurura ...
A. Pushkin "maGypsy": kuongororwa kwenhetembo
Mubasa rake rekutanga, Alexander Sergeyevich anowanzo teedzera pfungwa dzaByron naRusso. Vanyori ava vaive zvidhori zvemunyori mukuru weRussia, asi nguva yechirudo yakapfuura, uye nemifungo mitsva yakaonekwa ...
"Murzuk" Bianki - pfupiso yenyaya
Akanyora nyaya "Murzuk" naBianki. Pfupiso ichaita kuti muverengi azive nezveiri rinonakidza basa. Nyaya inotanga nezvinoitika musango. Muvhimi Munyori anounza muverengi kune mumwe wevatambi vakuru - harahwa Andreevich ...
Yesenin, "Imbwa yeKatchalov": ko chisikwa chakatsaurirwa kunaani? Isu tinoratidza chakavanzika chezana
Nyanduri mukuru weRussia uye anodikanwa nevakadzi Sergei Yesenin akaberekwa muna 1895, musi waGunyana 21, mutanaguru. Chii chakakwezva vakomana kana vasikana kwaari zvakanyanya? Kutanga, chokwadika, chimiro chisingadzivisike. ...
James Aldridge, Yekupedzisira Inch. Pfupiso yenyaya
J. Aldridge akanyora Yekupedzisira Inch mune yake maitiro maitiro. Munyori akatenda kuti chinhu chikuru kumusiki webasa ndechekuburitsa pachena kuti munhu akaumbwa sei, kubata iyo nguva kana vana vava vasikana ...
Mibvunzo ye49 mu database yakagadzirwa mu 0,597 masekondi.